Uhuru oo magacaabay wasiirro - BBC Somali - Warar
Uhuru oo magacaabay wasiirro
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 23 Abriil, 2013, 17:38 GMT 20:38 SGA
Uhuru Kenyatta waa Madaxweynaha cusub ee Kenya
Madaxweynaha dalka Kenya, Uhuru Kenyatta, ayaa ku dhawaaqay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiiraddiisa cusub.
Madaxweyne Uhuru ayaa ku dhawaaqay magacyada wasiirada Arrimaha Dibedda, Caafimaadka, Warfaafinta iyo Maaliyadda.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Kenya ayaa markii ugu horreysay loo magacaabay qof haweeney ah, oo asalkeedu Soomaali yahay, Aamina Maxamed.
Aamina ayaa waxa ay ahayd qof horey xoghaye joogta ah uga noqotay wasaaradda cadalaadda Kenya, xilligii Madaxweyne Kibaki, laakiin waxa ay dhawaan ahayd ku xigeenka Agaasimaha Guud ee hey'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan dhinaca degaanka UNEP.
Aamina waxa ay dhawaan u tartantay inay noqoto Agaasimaha Guud ee Hey'adda ganacsiga Adduunka ee WTO.
Wasiirka Maaliyadda waxaa loo magacaabay Henry Rotich, Wasaaradda Caafimaadka waxaa loo magacaabay James Macharia iyo Wasiirka Warfaafinta oo loo magacaabay Fred Matiangi.